8 ruux oo lagu dilay dagaal Muqdisho xalay ka dhacay. Ruunkinet 07/12/2009
Ugu yaran 8 ruux ayaa ku dhimatay tiro kale oo 30 gaarayana wey ku dhaawacmeen ka dib dagaal xalay ka dhacay magaalada Muqdisho kaas oo u dhaxeeyay ciidamada dowladda Soomaaliya iyo xoogaga mucaaradka oo ku dagaallamay meelo ay isku hor fadhiyeen qeybo ka mid ah waqooyiga magaalada Muqdisho.
Dagaalka, ayaa waxa uu ka dhacay agagaarka Isgoyska Jardiinka, Siinaay iyo meelo kale oo u dhow dhow, halkaas oo daryanka madaafiicdii la isku weydaarsanaayay laga maqlaayay qeybo kale oo ka baxsan deegaanada lagu dagaallamaayay.
Dadka ku dhintay dagaalka iyo kuwa dhaawacmay oo dhamaantooda wax yeelleysay madaafiic baadi ah oo deegaanadooda ugu tagtay, ayaa saraakiisha caafimaadku sheegayaan inay ahaayeen dad rayid ah oo aan dagaalka shaqo ku laheyn.
Dagaalka oo aan la ogeyn sida uu ku billowday, ayaa hadana waxa jirta in waayadii dambe ay dhinacyadan ku dagaallamaaya Muqdisho isku hor fadhiyeen deegaano ka tirsan waqooyiga Muqdisho oo badankood la wareegeen xoogaga mucaaradka ah.
Dowladda Soomaaliya iyo xoogaga mucaaradka ah ayaanan wali dagaalkan war rasmi ah ka soo saarin.
Xaaladda, ayaa maanta waxay aheyd mid degan.
Soomaali aad u fara badan oo Islii laga xir xiray
Ciidamo aad u fara badan oo isugu jira qeybaha kala gaddisan ee ciidamada dalka Kenya, ayaa lagu soo daadiyay labadii habeen ee la soo dhaafay xafadaha ay ka kooban tahay deegaanka Islii ee magaalada Nayroobi ee dalka Kenya.
Ciidamadasi , ayaa waxay xir xireen tiro aad u fara badan oo Soomaali ah kuwaas oo qaarkood laga qabtay Hoteelo ay deganaayeen ityo goobo ganacsi oo ay ku sugnaayeen.
Ciidamada ayaa waxay yihiin kuwa aad u feejigan islamarkaasina gaadiid kala gaddisan dadka ku daabulaayay, waxana ay sidoo kale wataan eeyo tababaran oo howl galladooda xir xiritaan ka qeyb qaadanaayay.
Illaa iyo hadda lama oga sababta ka dambeysa arrinkan, hasa yeeshee waxay ciidamada dadka qaar weydiinayaan marka ay qabtaan in uu ruuxa xiriir la leeyahay Alshabaab oo ka dagaallanta koonfurta Soomaaliya.
Dadka la xiray ayaa lagu qayaasayaa in kabadan 500 oo Soomaali ah kuwaas oo qaarkood la jirdilay, qaarna lacago lagu sii daayay markii ay xirnaayeen saacado.
Dad dhalin yaro ah ayaa sheegay in dadka la xiro ay isugu jiraan kuwa sharciga leh iyo kuwa aan laheyn intuba taas oo aan looga baran Kenyanku inay ku dhaqaaqaan.
Lama oga ololahan inta uu socon doono.
Madaxweyne Shariif oo ciidamo tababar ugu furay Muqdisho
Madaxweynaha dowladda Soomaaliya, ayaa maanta tababar u furay ciidamo ka badan 1000 askari kuwaas oo ka mid noqonaya ciidamada xooga dalka Soomaaliyeed oo ay hadda dowladda aas aaseyso.
Xerada Haama Dhowr ee degmada Xamar Jajab, ayay ciidankaani ku xareysnaayeen in muddo ah, waxana tababarkooda bixinaya rag ku taqasusay arrimaha ciidamada.
Madaxweynaha oo la hadlay ciidanka maanta, ayaa bogaadin u jeediyay dadka doonaaya inay dalkooda ka difaacaan cadowga islamarkaasina waxa uu uga digay inay sameeyaan wax kasta oo ciidamadaasi curyaamin kara, sida inay qabyaalad ku dhaqaaqaan ama ay hubka iibsadaan.
Madaxweynaha, ayaa ciidamadan cusub u sheegay in dowladda Soomaaliya ay markasta la socon doonto xaquuqda ciidamada islamarkasina mushaaraadkooda la siin doono.
Taliyihii hore ee ciidamada meleteriga Jeneraal Yuusuf Cismaan Dhuumaal, ayaa isna sheegay in sidoo kale ay jiraan in ka badan 4kun oo ciidamo meleteri dowladda ay leedahay uu dhawaan tababar ugu soo dhamaan doono dalka iyo dibaddiisa.
Jen. Dhuumaal ayaa waxa uu intaas ku darray in ay jiraan hadana ciidamo kale oo fara badan oo dalka ku sugan kuwaas oo doonaaya inay amaanka guud ahaan Muqdisho la wareegaan dhawaan.
Dowladda KMG ah ee Soomaaliya, aoo ay kala kulmeyso dagaal adag xoogaga mucaaradka ayaa isku dayaysa inay iska dhisto dhinaca ciidamada, laakiin saraakiishii hore ee ciidamada ay sheegayaan in fashilka ugu weyn ee tabar darrida ciidamada noqoneyso marka mushaaraad loo waayo ciidanka.
Dhanka kale maanta ayaa waxa magaalada Muqdisho ka dhacay dibad baxyo looga soo horjeeedo qaraxii Shaamo ee Khamiistii ka dhacay kaas oo dad aqoon yahanno, waaliddiin, suxufiyiin iyo dad kalae lagu xasuuqay.
Dadka, ayaa waxay wateen boorar ay ku qoran yihiin erayo ka dhan ahaa kooxaha qaraxa geystay iyo sidoo kale sida aanay marnaba raalli uga noqon karin in dadka la laayo, ayay socod ku tageen jaamacadda Banaadir oo ardey ka qalanjibineysay khamiisyii la xasuuqay.
Muddo ayay dadkan banaanbaxa sameynaayay, waxay hakiyeen isu socodka gaadiidka waddada dheer ee Maka Almukarrama illaa iyo isgoyska Banaadir, halkaas oo ay ka dhowdahay goobtii uu qaraxa ka dhacay ee Shaamo Hotel iyo jaamacadda Banaadi laf ahaanteeda.
Ruux isa soo miidaamiyay misena usoo labistay sida dumarka ayaa khamiistii isku qarxiyay ardey Soomaaliyeed oo doonaysay inay shahaaddo ka qaataan jaamacadda Banaadir oo muddo lix sano ah ay soo dhiganayeen, waxana halkaasi ku dhintay dad aad u fara badan oo indhaha bulshada ahaa.